ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူသည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသောဥပဒေကိုပြင်ဆင်သင့်ပါတယ် « Burma Democratic Concern (BDC)
Home » Burma Democratic Concern (BDC) » ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူသည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသောဥပဒေကိုပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်
ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူသည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသောဥပဒေကိုပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်
ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူသည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများ၏ ပုဒ်မ ၆ တွင် ဖော်ပြထားသည်ကိုပြင်ကိုပြင်ဖို့လိုပါတယ်
“ဒီဝှိုက်ကတ်ကိစ္စရှင်းဖို့လိုပါတယ်။ ပြသနာတော်တော်ငြိမ်းချမ်းသွားပါမယ်။ အဓိကပြသနာဖြစ်နေတာကအစိုးရကကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်မှန်မှန်ကန်ကန်မလုပ်လို့ပြည်သူကအစိုးရအလုပ်လုပ်၊ ဘုန်းဘုန်းတွေကဝင်လုပ်ရဖြစ်နေတာပါ။ ကိုယ်ရှုပ်ထားတာကိုယ်မရှင်းပဲနင်တို့ဝင်မပါနဲ့ပြောလေပြည်သူကပေါက်ကွဲထွက်လေပါ။ ဒီမဲရချင်တဲ့ကိစ္စတခုထဲနဲ့ပြည်သူကိုဂျောင်ထိုးလို့မရပါဘူး။အစိုးရကကိုင်တွယ်ရခက်နေသလားဆိုတာစဉ်းစားမိတော့ဒီကိစ္စကနိုင်ငံတကာကဝင်စွက်ရလောက်တဲ့အနေအထားလဲမရှိပါ။ Conflict တခုကိုမဖြစ်အောင်ကြိုတင်ကိုင်တွယ်ရင် root cause ကိုကိုင်တွယ်ရပါမယ်ဒီတော့ဒီမဲလိုချင်ကြတာနဲ့ပဲလုပ်နေတာတွေကိုရပ်ပြီးမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ဖို့လိုနေပါပြီရှင်။”
Copy from Ohn Mar Oo’s facebook profile page https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200818870466860&set=a.1055992772842.10224.1616532735&type=1&theater
Tags: 1990 election, 2008 constitution, 2010 election, arakan, Aung San Suu Kyi, Aung San Suu Kyi said "The Results of the 1990 General Elections Must Be Implemented", bdcburma, Bengali, Bogyoke Aung San, Buddhist, Burma, Burma Democratic Concern (BDC), burmese, Myanmar, News Music Life Rubble Politics Family Photography Travel Art Personal Food Religion Christmas Holidays Movies Poetry Random Books Culture Love Thoughts Writing Photos Fashion Video Friends Events Vid, Ra Khaing, rohingya, so-called Rohingya, White Card, Yakhine
By Burma Democratic Concern (BDC) in Burma Democratic Concern (BDC) on 23/06/2013 .
← Myanmar Opens to Business Opportunities, but is it sustainable?	The Most Important Factors Contributing To China’s Economic Growth (1) →